Distrikan’Ambatondrazaka Olana be ny famoaham-bokatra
Fiarovana sy fanaraha-maso ny omby Raikitra ny “Puce électronique »
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly alakamisy 16 mey 2019 tao Tsiroanomandidy Faritra Bongolava ny fametrahana ireo "puce electronique" ho an’ny omby, ka ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina no nisantatra izany tany an-toerana.
Ady amin’ny trondro vaventy amin’ny kolikoly « Tsy vita dimy taona »
Ny sehatry ny asam-panjakana no tena hanjakan’ny kolikoly sy ny risoriso eto amintsika, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena, Harisolofo Rakotondrabe Andriamihanta.
Tontolo politika eto Madagasikara Miha ratsy hatrany
Ahoana ny fomba hitokisan`ny olona ny mpanao politika raha miharihary ny zavatra hitany ?
Sehatra fizahantany Tsy ampy fahaiza-manao ny Malagasy
Atrikasa nandritra ny 3 andro hanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manaon’ireo mpisehatra amin’ny fizahantany no notanterahina tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina. Nifarana omaly alakamisy 16 mey ny hetsika ary mpandray anjara 70 teo no nandalo tao, nahitana ireo avy any amin’ny faritra. Lohahevitra 2 no novelabelarina sy nifampizarana omaly.
Teknolojia vaovao Tsy maintsy hirosoana
Saika nitodika tamin’ny fandrosoan’ny teknolojia ny tatitra momba ny fandrosoana maneran-tany navoakan’ny Banky Iraisam-pirenena. Maro ny firenena matahotra ankehitriny amin’ny fampiasana ny robot amin’ny fiantraikany amin’ny tontolon’ny asa.
Alasora Toaka gasy 260 litatra no saron’ny mpitandro ny filaminana
Toaka gasy 260 litatra no saron’ny polisin’ny CSP Alasora teny amin’ny By pass ny alarobia 15 mey, tokony ho tamin’ny 9 ora alina.
Mpifankatia nifamono Tovovavy voatsindron’antsy tao amin’ny “chambre”
Tovovavy iray no hita nitsirara torana tsy nahatsiaro tena, nihoson-dra tao amin’ny Maeva Hotel, efitra 101 ao Mahajanga omaly hariva tokony ho tamin’ny 7 ora.
Mampikaikaika ny vahoaka ny fahapotehan’ny lalam-pirenena faha-44 ary sahirana ny tantsaha amin’ny famoaham-bokatra.
Tokony handraisan’ny fanjakana andraikitra haingana satria mitotongana ny fari-piainan’ny mponina. Ankoatra izay dia manjaka ny tsy fandriampahalemana ary tsizarizary ny sehatra fampianarana. Ilaina ny fijerena ifotony ny olana mianjady ny vahoaka any Ambatondrazaka, hoy ny kandida depiote avy any amin’iny faritra iny, Ramatoa Anja Malala Akon’Alaotra. Iaraha-mahalala fa sompitr’i Madagasikara any amin’iny faritra iny ary saika tantsaha ny maro an’isa. Tokony hatao vaindohan-draharaha ihany koa, hoy izy ny fampidirana rano sy vovo amin’ireo kaominina maro tsy manana izany. Tsy hiandrasana ny hafa ny asa fampandrosoana fa ny rehetra afaka manao ny tandrify azy ary tena ilaina ny vehivavy mandray andraikitra, hoy hatrany izy.